प्रेम वा विवाह असफल भए के गर्ने ? - IAUA
ramkrishna November 10, 2016	प्रेम वा विवाह असफल भए के गर्ने ?
हालसालै २०–२२ वर्ष कि महिलाले आवेशमा आएर ‘यस्तो जिन्दगीभन्दा मर्नु बेस’ भन्ने सोचेर विष सेवन गरिछन् । परिवारजनले छिट्टै थाहा पाएर अस्पतालमा ल्याए । भर्ना गरेर उपचारपछि बाँचिन् । यस्तो जल्दोबल्दो उमेरमा किन आत्महत्याको प्रयास गरिन् ? के कस्तो समस्या छ ? काउन्सिलिङ गर्नुपर्छ कि ? भनेर मकहाँ रेफर गरेपछि मैले कारणहरुको खोजी गरें ।
ती महिलाको भनाईअनुसार २ वर्ष लामो प्रेम सम्बन्धपछि र दुवैल एक–अर्कालाई बुझेपछि बुझेपछि ६ महिना पहिले उनीहरुको विवाह भएछ । विवाहको १–२ महिना मै उनीहरुको सम्बन्धमा समस्या देखिन सुरु भएछ । विवाह हुनु पूर्वजस्तो प्रेम, कुराकानी आदि सबै हराएछ । प्रायः विवाद हुने भएछ । श्रीमानले घरमा समय नदिने, उनको कुरा पटक्कै नसुन्ने, अरु केटीहरुको फोन आएको बारे सोध्दा केही नबताउने त छँदै थियो, हातै हाल्ने अवस्था आयो । उनले सहन सकिनन र विष सेवन गरिन् रे ।
Previous Previous post: शास्त्र भन्छ : प्रेम र बिवाह ग्रहकै खेल हो, कुन अवस्थामा प्रेम र कुन अवस्थामा बिवाह हुन्छ जानी राखौ !
Next Next post: तपाई दैनिक कति पानी पिउनु स्वास्थको लागि उपयुक्त हुन्छ ?